VezveMatongerwo eNyika Vonzi Votsvaga Rutsigiro Muzvikoro
Chikunguru 21, 2011
Gurukukota rezvedzidzo, VaDavid Coltart, vati bazi ravo riri kuongorora kushungurudzwa kwavanoti kuri kuitwa vana vechikoro nevamwe vakuru-vakuru vemapato ezvemazvematongerwo enyika, vavati vari kuisa zvematongerwo enyika muzvikoro.
VaColtart vati vezvematongerwo enyika ava vari kupinda muzvikoro vachihwanda nenyaya dzemitambo yakaita senhabvu, asi vachida kutsvaga rutsigiro.
Bepanhau repainternet reRadio VOP rati kubva pakatanga kutaurwa nezvesarudzo, vezvematongerwo enyika, zvikuru veZanu PF, vari kumhanyidzana kuisa makwikwi emitambo muzvikoro senzira yekutsvaga rutsigiro.
Radio VOP yatiwo vamwe veZanu PF vakaronga mitambo yenhabvu muzvikoro mazuva mashoma apfuura vanosanganisira gavhuna veManicaland, VaChristopher Mushowe, gurukota rezvekutongwa kwematunhu, VaIgnatius Chombo, pamwe negurukota rezvekuburitswa kwemashoko, VaWebster Shamu.
Vezvematongerwo enyika ava vanonzi vari kupa zvikoro zvinenge zvapinda mumakwikwi aya mayunifomu, mikombe pamwe nemari.
Mugore ra2008, zvikoro zvizhinji zvinonzi zvaishandiswa semabhesi ekushungurudzira vanhu, zvikuru vanopikisa Zanu PF.
Munyori mukuru wePTUZ, VaRaymond Majongwe vaudza Studio 7 kuti sangano ravo hari tambiri pfungwa yekuti vezvematongerwo enyika vatsvage rutsigiro muzvikoro vachivhiringidza kudzidza kwevana.
Asi Chief Executive Officer weZIMTA, VaSifiso Ndlovu vati havaoni chakaipa kana vezvematongerwo enyika vachibatsira kupinza budiriro muzvikoro, asi vati sangano ravo hari tambiri kushungurudzwa kwevana vechikoro.
Hurukuro naVaRaymond Majongwe pamwe naVaSifiso Ndlovu